जिन्स र टाइट कपडा लगाउनुहुन्छ ? सावधान! जिन्स र टाइट कपडा हेल्थका लागि हानीकारक! « गोर्खाली खबर डटकम
स्किनी जिन्स र हुडीस लगाउनु हुन्छ भने सावधान हुनुहोस् । किनभने स्किनी टाइट जिन्स लगाउँदा ब्याक पेन बढ्न सक्छ । ब्रिटिश काइरप्रैक्टिक एसोसिएशन (BCA) का अनुसार, फेशन छनौट तपाईको हेल्थमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।